माया गर्नेहरु बढेका छन् : विद्या तिवारी, नवगायिका
‘नेपाल आइडल’ रियालिटी शो मार्फत एकाएक चर्चा बटुलेकी हेटौंडाकी नवगायिका विद्या तिवारीको अचेल दिनचर्या फेरिएको छ । आइडल प्रतिस्पर्धामा भाग लिनुअघि काठमाडौंको एक समाचार संस्थामा ‘फ्रन्ड डेक्स अफिसर’मा कार्यरत गायिका तिवारी आजभोलि सांगीतिक कार्यक्रम र मिडियामा अन्तर्वार्ता दिन व्यस्त छिन् । पछिल्लो पालि उनले १४ फेब्रुअरीको भ्यालेनटाइन डे (प्रणय दिवस) मा दरबारमार्गस्थित एक क्लबमा प्रस्तुति दिइन् । विद्या एन्ड इलुजन व्यान्डमार्फत् प्रस्तुति दिँदै आएकी उनी यस वर्षको प्रणय दिवसमा नयाँ गीत दर्शक, श्रोतामाझ पस्कन नपाएकोमा भने खिन्नता प्रकट गर्छिन् । काठमाडौं बबरमहलमा एभरेष्ट संवाददातासँग कुराकानीमा उनले भनिन्, ‘भ्यालेन्टाइन डे मा गीत ल्याउने तयारी थियो, तर ल्याउन सकिनँ । अब एक महिनाभित्र ल्याउने छु ।’ भर्सटाइल सिंगर बन्ने इच्छा रहेको बताउने सुरिलो स्वरकी धनी गायिका विद्या तिवारीसँग गरिएको अन्तरंग कुराकानी ।
दिनचर्या कसरी बिताइरहनुभएको छ ?
कलेज धाउने र सांगीतिक कार्यक्रमहरुमा प्रस्तुति दिनमै समय खर्च भइरहेको छ । म एभरेस्ट कलेज थापाथलीमा बीबीएस चौथो वर्षमा अध्ययनरत छु ।
गायन क्षेत्रमा कसरी लाग्नुभयो ?
औपचारिक रुपमा गाउन थालेको ३ वर्ष पुग्दै छ । तर, गीत गुनगुनाउने र गाउने सानैदेखि गर्थें । बुवाको पनि गायनपट्टि इच्छा । काठमाडौं आइसकेपछि बुवाले नै रेडियो नेपालमा गायन प्रतियोगिताबारे गोरखापत्रमा विज्ञापन देख्नुभएछ, त्यसपछि मलाई भाग लिन जाउ भन्नुभयो । त्यहाँ गुरु प्रमोद प्रसाईंसँग भेट भयो । त्यसपछि उहाँसँग निरन्तर सिक्ने अवसर मिल्यो । उहाँले नै नेपाल आइडलमा जान सुझाव दिनुभएको हो । गुरुले मेरोबारेमा इस्टर्न र वेस्टर्न पार्ट स्टोङ छ भनेर बेलाबेलामा कमेन्ट गर्नुहुन्थ्यो । र, सुधार गर्न सुझाव दिनुहुन्थ्यो । गुरु प्रमोद प्रसाईंसँग अहिले पनि शास्त्रीय संगीत सिक्दैछु ।
विदेश जाने योजना भत्काएर संगीतमा लागेको भन्ने सुनिन्छ, हो ?
पहिले विदेश जाने भन्ने प्लान थियो । तर, म्युजिकले नै विदेश जाने मेसो रोकिएको छ । म्युजिकमै केही गरौं भन्ने लाग्यो । हेरौं, हुन्छ होला । मिहिनेत गरे फल अवश्यक पाइन्छ भन्ने कुरालाई फलो गर्दै जाने छु ।
कलाकारै बन्छु भन्ने सोच्नुभएको थियो सानी छँदा ?
गायिका नै बन्छु भन्ने त सोचेकी थिइनँ ।
नेपाल आइडलमा ‘टप १८’ भएर बाहिरिएपछिको समय कसरी गुजार्नुभयो ?
आइडलबाट आउट भएपछि मिडियामा इन्टरभ्यू दिने र आफ्नै गीत बनाउन लागेँ । भिडियो बनाएँ । ‘हेलो हाई’ गीत गाएँ । त्यो गीतको भिडियोमा प्रियंका कार्कीले अभिनय गर्नुभएको छ । त्यसअलावा चितवन, पोखरा, बुटवल, काठमाडौं, धनकुटालगायत सहरहरुमा शो गर्न पुगेँ । त्यसबाट धेरै कलाकारसँग स्टेज सेयर गर्न पाएँ ।
भनेपछि आइडलबाट तपाईलाई कलाकार बन्न ठूलो सहयोग पुगेछ ?
हो, मलाई फाइदै भयो । आयोजकले मेरो प्रमो फालेपछि संगीत क्षेत्रमा चिनाउने र चिनाउन सकियो ।
तपाईको स्वरमा रहेका गीतहरुचाहिँ ?
अहिले सञ्चारमाध्यममा बजिरहेको ‘मनको ढोका’, ‘हेलो हाई’ लगायत छन् । मनको ढोकाको शब्द प्रदीप चापागाईंले रचना गर्नुभएको हो भने संगीत सञ्जीव सिंहको रहेको छ ।
अब कुन कुन गीत ल्याउँदै हुनुहुन्छ ?
विद्या एन्ड इलुजन व्यान्ड दर्ता गरेकी छु । यसबाट तत्कालै दुई÷ तीनवटा गीतहरु फाल्दैछु । नयाँ आउने गीतअन्तर्गत बीपी वाग्लेले कम्पोज गरेको ‘आउ तिमी’ सकेसम्म चाँडो बजारमा ल्याउने तयारी गर्दै छु । भ्यालेन्टाइन डे मा सार्वजनिक गर्ने तयारी भए पनि सकिनँ । अन्य थुप्रै गीतको पनि तयारी सुरु भएको छ ।
तपाईलाई बढीजसो कुन विधाका गीत गाउन मन पर्छ ?
मैले धेरैजसो लोक, आधुनिक, पप गीत गाएकी छु । म प्रायः सबै खालका गीत गाउँछु । मेरो इच्छा पनि भर्सटाइल सिंगर बन्ने छ । विषयवस्तुका हिसाबले मोटिभेसनल, इन्स्पिरेसन दिने खालका गीतहरु पनि गाउने गर्छु ।
मनपर्ने अग्रज स्रष्टाहरुको नाम लिनुपर्दा ?
नारायण गोपाल, अरुणा लामा, तारा देवी, शान्ति ठटाल, अम्बर गुरुङलगायत । उहाँहरुबाट नै सिकेर म यहाँसम्म आएको हुँ । अहिले नै ठूलो काम गरेँ भन्ने होइन मेरा संघर्षका दिन बाँकी छ ।
कार्यक्रमका लागि कत्तिको अफर आइरहेको छ ?
देश, विदेशबाट अफर आउनेक्रम जारी छ ।
उसोभए कमाइ पनि हुन थालेको छ ?
कार्यक्रमहरुमा प्रस्तुति दिएबापत पारिश्रमिक लिन्छु । १०–१५ हजार महिनाको तलब थाप्ना अरुको अफिसमा काम गर्नुभन्दा आफ्नो इच्छाअनुरुप गीत गाएर फाइदा लागिरहेको छ । यस क्षेत्रमा अहिलेसम्म कमाएको सबभन्दा ठूलो सम्पत्ति दर्शक, श्रोताको सपोर्ट र माया गर्ने फ्यानहरु हो ।
प्रेम दिवसचाहिँ कसरी मनाउनुभयो ?
यसवर्षको भ्यालेनटाइन डे काठमाडौंको दरबारमार्गस्थित भिट्रिमामा प्रस्तुति दिएर बिताएँ । जहाँ रमाइलो महसुस भयो ।
तपाईको लभ परेको होला नि ?
प्रेम गरिएको छैन ।
भ्यालेन्टाइन डेमा प्रस्ताव आएन ?
प्रस्ताव आउँछ, आइरहन्छन् । कसैले प्रेम प्रस्ताव गर्नुहुन्छ, म धन्यवाद भनिदिन्छु । कसरी लिने भन्ने कुरा आफैंमा भर पर्ने कुरा हो । गत वर्षको तुलनामा माया गर्छु भन्नेहरु बढेका छन् ।
प्रेम प्रस्ताव स्वीकार्ने बेला भएन र ?
दिन आएपछि स्वीकारम्ला । हामीलाई म्युजिकमै प्रेमी, ब्वाइफ्रेन्ड हुन्छन् ।
संगीतबाहेक केमा रुची लाग्छ ?
सामाजिक क्षेत्र सम्बन्धित काम गर्न मनपराउँछु । त्यसमा पनि बालबालिकाको सेवा गर्नेतिर मन जान्छ ।
रुचीमात्रै हो कि काम पनि गर्नुभएको छ ?
गृहजिल्ला हेटौंडामा जन्मदिन र विभिन्न चाडपर्वको अवसरमा सहयोग गर्ने गरेकी छु । अब पनि सक्ने सहयोग गर्नेछु ।